Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo ku wajahan Dhuusamareeb iyo ujeedka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wednesday, Dec 08, 2021.
Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo ku wajahan Dhuusamareeb iyo ujeedka
Ardaan Yare 24 January 2021
Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya James Swan iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa Maanta oo Aaxd ah waxaa ay ku wajahan yihiin Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug.
Socdaalka James Swan ayaa waxaa ku wehlin doona xubno kala duwan oo ka tirsan Beesha Caalamka, iyagoona saacadaha soo socda ka amababixi doona sida uu qorshahu yahay Magaalada Muqdisho.
Ujeedka safarka Wakiilka Qaramada Midoobay ayaa waxaa uu yahay sidii uu kulan ula yeelan lahaa Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, iyagoona ka wada hadli xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Sidoo kale labada dhinac ayaa sigaar ah diirada kulankooda ugu saari doona qaabka lagu xalin karo ah khilaafka weli ka taagan qabsoomida doorashada dalka ka dhaceysa 2021, isla markaana shir lagu keeni lahaa dhinacyada isku haaya doorashada.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa Madaxweyne Qoorqoor ka xog-wareysan doona xaaladda guud ee deegaanada maamulkaas iyo mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo halkaas.
Beesha Caalamka ayaa dadaal ugu jirta in xal laga gaaro is mari waaga doorashada, iyadoo cadaadis ku saareysa dhinacyada kala duwan inay wada hadal yeeshaan, waxaana xusid mudan in dadaalada uu qeyb ka yahay Madaxweyne Cabdicaiis Lafta-gareen.
Lafta-gareen oo soo gaaray Muqdisho iyo Qorshe xalin ah oo weli socda
DEG DEG:-Dil Goordhow ka dhacay Magaalada Muqdisho
Categories Select Category Af Soomaali (10,687) Africa (2,403) Algeria (4) Angola (11) Burkina Faso (1) Burundi (14) Cameroon (32) chad (7) congo (61) Djibouti (30) Egypt (68) Eritrea (48) Ethiopia (176) gabon (2) gambia (6) Ghana (21) guinea (1) Guinea-Bissau (4) Ivory Coast (5) Kenya (274) Liberia (23) Libya (76) mali (8) Mauritanian (1) Morocco (20) Namibia (2) niger (8) Nigeria (57) rwanda (15) Sierra Leone (13) South Africa (91) south sudan (94) sudan (41) Tanzania (16) Tunisia (10) uganda (55) Zambia (16) Zimbabwe (27) Asia (427) Afghanistan (19) Bangladesh (4) china (218) India (24) indonesia (12) Malaysia (1) mynamar (6) north korea (2) pakistan (17) Philippine (3) Singapore (1) Australia (16) Business (291) Business (6) canada (1) Economy (168) Editorial (521) Education (39) Entertainment (67) Europe (629) Austria (9) belgium (1) France (26) German (38) Ireland (3) Italy (18) Rusia (35) spain (37) turkey (43) Ukraine (4) United Kindom (185) Exclusive (7) Fashion (4) Featured (8,331) Food (54) Health (241) Horn of Africa (165) Islam (84) Mareeg العربية (3) Middle East (400) Iran (16) Iraq (37) Israel (58) kuwait (4) qatar (10) Saudi Arabia (58) syria (40) UAE (11) Yeman (29) Notices (6) Opinion (59) Our Contacts (1) politics (54) Science (67) Senegal (2) sheeko-jaceyl iyo love (5) sidebar (3) Somalia (5,468) Archive of mareeg (12) Sports (290) technology (58) travel (8) ubax-sheeko.htm (1) Uncategorized (253) United states of america (254) World news (599) PARAGUAY (1) Venezuela (4)
Af Soomaali 10687
Latest: Saciid Deni oo ixtiraami waayay isimada Puntland kana hor yimid go’aanka ay ka soo saareen PSF-ta
Latest: USA Loses Ethiopia; Biggest Strategic Blunder Since Loss of Iran
Saciid Deni oo ixtiraami waayay isimada Puntland kana hor yimid go’aanka ay ka soo saareen PSF-ta